EyoMsintsi 7, 2018 admin
inkundla ephakamileyo eTshayina uyakuqonda ubungqina blockchain ebophelelayo ngokomthetho
Blockchain ngoku ukusetyenziswa ngokusemthethweni ukuqinisekisa ubungqina ingxabano kwezomthetho e China, ngokutsho kwiNkundla Ephakamileyo yelizwe. Inkundla yakhupha imithetho emitsha ngoLwesihlanu - ukuba ukuthatha isiphumo ngokukhawuleza - ukucacisa imiba ngemiba enxulumene nendlela iinkundla intanethi in China kufuneka uqwalasele iimbambano zomthetho.
Inxalenye ummiselo omtsha ikhankanya ukuba iinkundla intanethi China ayaqonda blockchain njengendlela asemthethweni ukugcina yokuqinisekisa ubungqina digital, ukuba amaqela angabonisa malunga nokuvumeleka ngokusemthethweni neteknoloji esetyenziswa kwinkqubo. I sigwebo senziwa ukuphendula imibuzo ezahlukahlukeneyo eziye zavela ukususela Ilizwe liseke entendelezweni yayo yokuqala intanethi e Hangzhou kunyaka ophelileyo - enye ujongana iingxabano kwimiba esekelwe kwi-intanethi, ebandakanya ngokuqhelekileyo data digital.
njengonogada Australian ukusebenzisa imithetho kwimarike utshintshiselwano crypto
A somthetho zemali Australian phezulu iye yabonisa ukuba uza kuthatha indlela entsha xa elawula Exchange cryptocurrency, kwakunye nsinya kuhlolwa iminikelo kokuqala lwemali (ICOs). Kwisicwangciso sayo lwenkampani 2018-2022, yakhululwa namhlanje, i Australian Securities and Investments Commission (.GOKO) kuchaziwe iinkalo zalo zojoliso, leyo ukuze uqhubeke “esweni izoyikiso ingozi kwimveliso asahlumayo” ezifana ICOs kunye cryptocurrencies.
Further, for 2018 yaye 2019, .GOKO uthe uphuhlisa sikhokelo entsha eya kusebenza “kwemimiselo elawula ababoneleli izibonelelo zorhwebo utshintshiselwano crypto” kwaye angenelele apho “kukho ukuziphatha kakuhle kunye nomonakalo anako ukuba abathengi kunye nabatyali zimali.”
Goldman CFO iphika iingxelo siqinile ditching kwedesika crypto sorhwebo
Ebutsheni baleveki, Business Insider ingxelo ukuba Goldman Sachs ukuba nixing ukudaleka idesika yorhwebo Bitcoin. ngenxa kubikwa kwimiba zolawulo kwakunye nokuba eziphambili eziphezulu, umzekelo. inkonzo lokukhulisa crypto. Kodwa e TechCrunch San Francisco ukuba ukuphazamisa Conference, CFO Goldman Sachs 'Martin Chavez bathi iingxelo malunga ukubuyisela evela edesikeni lorhwebo cryptocurrencies neendaba fake. “Ndicinga omnye izinto ezintle ngathi kukuba awabhalwa malunga kakhulu. Andizange ndicinge ukuba ndiza kuva mna ukusebenzisa eli gama kodwa ngokwenene kufuneka achaze ukuba iindaba iindaba Fake.”
Chavez Kwakhona wathi indlela Ukuhlolwa asethi digital yinto ukuba "wayeza kuba kusenzeka ngokuhamba kwexesha." Ekubeni May, Goldman Sachs iye msulwa amakamva Bitcoin-edityaniswe izivumelwano ezifundiswa liSebe CBOE ne CME. kungenjalo, ibhanki usafuna kakhulu ndicinga indlela ukuphendula umdla umxhasi xa kuziwa ezimalini virtual.
Abazalwana Winklevoss win lomenzi kwinkqubo yokugcina iqhosha crypto
exchange Crypto Gemini be Cameron kunye Tyler Winklevoss uwine lomenzi wechiza ukuba indlela yokugcina ebandayo ebandakanya iikhompyutha air-gapped, ezimnyama ngokunjalo okude, amakhadi zeplastiki, mhlawumbe, ibungu. I-patent icacisa isicwangciso ukuphuhlisa uthungelwano iikhompyutha ekwaziyo okuvelisa akhawunti ukugcina cryptocurrencies okanye cryptocurrency-ezinxulumene iimveliso exchange-wasebenza (ETPs). Njengenxenye njengenyathelo lokhuseleko, kweekhompyutha babeza bodwa ngaphandle xa kuyimfuneko ukudlulisela asethi, ngocoselelo esebenza njenge isixhobo ebandayo yokugcina.
Kweekhompyutha uzakujikelezisa ezi keys akhawunti entsha, nto leyo ke abamnkela ibe nxalenye kubhalwa kwi sixhobo sangaphandle memory, efana flash drive, CD, DVD okanye ebhalwe phantsi ngokoqobo phezu ikhadi elaminethiweyo, ephepheni, iqhekeza eplastiki okanye ngqangi, ngokutsho uxwebhu. Kweekhompyutha kwakuza kufuneka ukufikelela portal ekhuselekileyo, kwakunga, ukuba kuyafuneka, ukudibanisa oomatshini zothungelwano blockchain ukuze Ngenkcazelo, uxwebhu uchaza.
Ingxelo Daily Market Kraken for 06.09.2018
Post Previous:Blockchain News 06.09.2018